विप्लवका हतियार खोइ ? - हाम्रो देश
काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, विप्लव शुक्रबार औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएका छन् । सरकार र सो समुहबीच तीन बुँदे सहमति भएको भोलीपल्ट उनि नवलपरासीबाट पहिलो पटक सार्वजनिक भएका हुन् । त्यहाको तस्विर सार्वजनिक गरेपछि काठमाडौं आएका उनि राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै मञ्चबाट सार्वजनिक भएका हुन् ।
यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ। सभागृह मै सरकार र विप्लव समुहबीच तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सहमतिमा सबै विषय राजनीतिक सम्वादबाट टुंगो लगाउने, हिंसाको राजनीति त्याग गर्ने, प्रतिबन्ध हटाउने, पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ ।
सो सहमतिमा सबैले चासो व्यक्त गरेको हतियारका विषयमा केही पनि उल्लेख छैन । तत्कालिन नेकपा माओवादीसँग शान्ति सम्झौता हुँदा पनि नेपाली सेनाबाट लुटिएको हतियार सार्वजनिक गरिएको थिएन । त्यस्तै प्रकारको घटना यो पटक विप्लव समुहमाथी पनि भएको छ ।हतियारका विषयमा सरकार र विप्लव समुह दुवै मौन रहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि हतियारका विषयमा सहमति नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सहमति गर्दा हतियार बुझाउने बुँदा नदेखिएको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् । शुक्रबार ट्विटमार्फत प्रवक्ता शर्माले राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
‘प्रचण्ड आउँदा खोलाले बगायो थोरै हतियार, विप्लव आउँदा पुरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’, उनको प्रश्न छ ।हस्ताक्षरपछि विप्लवले सम्बोधन गर्दै आफुहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको भन्दै आशंका नगर्न आग्रह गरे । करिव १८ मिनेट बोलेका उनले कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा भने प्रवेश नै गरेनन् । उनले तीन बुँदे सहमति देशको समृद्धिका लागि गरिएको स्पष्ट पार्न खोजे ।
‘यो सहमति नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मात्रै होइन र केही नेताहरुको मात्र होइन । यो सहमतिमा हामीभित्र लुकेको महान् आकांक्षा छ । नेपाल देशलाई आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर बनाउने सपना यो भित्र छ’, उनले अगाडी भने, ‘यो भित्र देशमा दीर्घ शान्ति, स्थिरता र नेपाली जनताको अहिलेसम्म पूरा नभएको समृद्धिको आकांक्षा, नेपाली युवाहरुभित्र हुर्किएको एउटा समृद्ध जीवनको चाहना रहेको छ ।’
विप्लवले विषय नखुलाई जनमत संग्रहमा जानुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् । तर, कुन विषयमा जाने हो भनेर उनले उल्लेख गर्न चाहेनन् । हतियार, पूर्वसहकर्मी, संसदीय व्यवस्थामा अब कस्तो भूमिका हुन्छ ? जस्ता जटिल प्रश्नमा उनि मौन नै रहे । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको भने उनले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।
‘कम्युनिष्टहरु विद्रोह मात्रै गर्दैनन् । जब परिस्थिति बदलिन्छ, परिस्थिति बदलिएर राज्यले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको स्थितिमा कम्युनिष्टहरु भनेका शान्तिका दूत पनि हुन् । विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छन् भने कम्युनिष्ट नै छन्’, उनको भनाई थियो ।